Yan Aung: အိတ်မှောက်သွန်ပစ် နှစ်ဆယ့်ရှစ်
“လူတစ်ယောက်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိချင်ရင် သူနဲ့ခရီးအတူတူ ထွက်ကြည့်” တဲ့။ ခရီးတူတူထွက်တဲ့ အခါကျတော့မှ အဲဒီ့လူဟာ ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲတွေကို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်သူလား၊ ခြူသံပါအောင် ညည်းညူပြစ်တင်ပြီး ဇီဇာကြောင်တတ်သူလား ဆိုတာတွေကို သိလာနိုင်သလို ထကြွလုံ့လရှိမရှိ၊ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုရှိမရှိ၊ တစ်ဖက်သားအပေါ် စိတ်စေတနာကောင်း ထားမထား စတာတွေကိုပါ အကဲခတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဘလော့ဂါမသက်ဝေကတော့ သူနဲ့အတူတူ ခရီးတူတူထွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အဝေးက လူတွေအကြောင်းကို လှမ်းပြီး စနည်းနာချင်ပုံ ပေါက်ပါတယ်။ ပညာသားပါပါနဲ့ သူတို့တွေရဲ့ အိတ်တွေဖာတွေကို သွန်ခိုင်းမှောက်ခိုင်းပါလေတော့တယ်။ အထဲမှာ ဘာတွေများ ရှိမလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။
တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်နေကျ ပိုက်ဆံအိတ်၊ လက်ဆွဲအိတ်လေးတွေထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လူမှုဘဝ နေပုံထိုင်ပုံကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေ တတ်တယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ပိုက်ဆံအိတ်လေးတွေ ဖွင့်ပြခိုင်းတဲ့ တက်(ဂ်)ပို့စ်လေးတွေကို ရေးခိုင်းတာဟာ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်က ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်မြင်မိတယ်။
နောက်တစ်ခု ရှိသေးတာက ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူတို့နေ့စဉ် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်အရွယ်အစား ကွာခြားမှုရှိသလို ရုံးသွားရုံးပြန် သယ်ဆောင်သွားလေ့ရှိတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေလည်း အနည်းအများ ကွာခြားတတ်ပြန်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မိန်းမတွေဟာ ယောင်္ကျားတွေထက် ပစ္စည်းတွေကို ပိုသယ်ဆောင်ထားတတ်လေ့ ရှိတယ်။ ဒါဟာလည်း သိပ်တော့ မဆန်းကြယ်လှပါဘူး။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်အတွက် သူ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ ခေါင်းဖြီးတွေ၊ ရေမွှေးတွေ ဆောင်ထားဖို့ မလိုအပ်ပေမယ့် မိန်းမတစ်ယောက် အတွက်တော့ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ တစ်ခြားအရေးပေါ် အသုံးအဆောင်တွေကို ထည့်ထားဆောင်ထားဖို့ လိုအပ်နေတတ်တယ်။
ဒီမှာတင်ပဲ မိန်းမတွေဟာ ပစ္စည်းများများ ဝင်ဆန့်မယ့် စလင်းဘတ်အကြီးကြီးတွေ၊ ပိုက်ဆံအိတ်အကြီးကြီးတွေ ကိုင်ဆောင်လာရုံသာမက တစ်ချို့ဆိုရင် ရုံးသွားရုံးပြန် အိတ်နှစ်လုံးလွယ်တဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံးသွားချိန်မနက်ခင်းတွေမှာ ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက် မိန်းမတွေဟာ လက်တစ်ဖက်မှာ စလင်းဘတ်တွေ၊ ပိုက်ဆံအိတ်တွေကို လွယ်ထား၊ ကိုင်ထားတတ်သလို တစ်ခြားလက်တစ်ဖက်မှာလည်း ထမင်းချိုင့်၊ ရေဗူး၊ စာအုပ်စတာတွေကို သယ်ဖို့ နောက်ထပ်အိတ်တစ်လုံးကို ကိုင်ထားတတ်ပြန်တယ်။ ဒါတောင် Laptop ကွန်ပျူတာထည့်တဲ့ အိတ်မပါသေးဘူး။
ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်ကတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ၊ ကုတ်အင်္ကျီအိတ်ထဲ ထိုးထည့်ထားတတ်ပြီး နေ့လယ်စာကိုတော့ ထမင်းချိုင့်လေး (သို့) ထမင်းချိုင့်ထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကလေး ကိုင်သူကိုင်၊ ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာ ဝယ်စားသူဝယ်စား လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယောင်္ကျားလေးတွေ ရုံးသွားရုံးပြန် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဟာ ဘာမှအပိုဆာဒါး မပါသလောက် ရိုးရှင်းမှုရှိပါတယ်။ ဒီတော့လည်း တစ်ဖက်က ကြည့်ပြန်ရင် ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ ပစ္စည်းထည့်နိုင်ဖို့အတွက် အိတ်ကပ်ပါတဲ့ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီတွေကို မိန်းမတွေထက် ပိုပြီးရွေးချယ် ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ အိတ်ဋီကာ ဖွင့်ဆိုချက်ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုး ရှည်လျားထွေပြား ဖွင့်ဆိုရသလဲ ဆိုရင်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် သူတို့ကိုင်နေတဲ့ အိတ်တစ်လုံးကို ဖွင့်ပြလိုက်ရုံနဲ့ သူတို့ဘာတွေ သယ်လာတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပေမယ့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်အတွက်တော့ သူတို့ဝတ်စားထားတဲ့ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီတွေထဲမှာ ဘာတွေထည့်ထားသလဲ ဆိုတာထိပါ လိုက်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
ဩော်… သူများတကာတွေ အိတ်တွေသွန်ကြ၊ ဖာတွေမှောက်ကြလေတော့ သူ့ဖာသာသူ သွန်ကြ၊ မှောက်ကြတာပဲဆိုပြီး သူများတွေ မှောက်ထားသွန်ထားတာတွေကို သွားကြည့်လိုက်၊ ခိုးခိုးခိခိ လုပ်လိုက်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်(ခ်)မှာ တင်ထားတာဆိုရင် လိုက်ခ်လုပ်လိုက်၊ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတာဆိုရင် ကော်မန့်ရေးလိုက် လုပ်နေခဲ့တယ်။ မနေ့ကတော့ မိုးအေးအေးလေးရှိတာမို့ အခန်းထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေးလေး တစ်ယောက်တည်း ‘မိုးစက်တင်လေ’ သီချင်းလေးနဲ့ တန်ဂိုအကလေ့ကျင့်နေမယ်ကြံသေး၊ ကိုရန်အောင်လည်း မှောက်ပြသင့်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး၊ မှောက်ပြရမယ်၊ နိုး. နိုး. မှောက်ရမယ်ဆိုပြီး တက်(ဂ်)လာကြပါလေရော။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ဘဝမှာ ကြောင်လက်သည်းဝှက်သလို ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်လေးပဲ နေချင်ခဲ့တဲ့ မြေပြန့်က မြန်မာအမျိုးသားလေး တစ်ယောက်ပါ။ (အဟမ်း.. အဟမ်း.. ချောင်းဆိုးသံကြားလိုက်မိသလိုပဲ။ အဟတ်ဟတ်.) အဲလိုပြောလိုက်လို့လည်း ကျွန်တော့်အိတ်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဘာမှမရှိဘူးလို့လည်း မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးသတ္တဝါဟာ မိမိကိုယ်တိုင်ပါပဲဆိုတဲ့ စကားလေးလိုပေါ့။ လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆတတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ အပေါ်မှာ စကားပလ္လင်ခံခဲ့သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်အိတ်ကို မှောက်တဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံအိတ်သာမကဘဲ ဘောင်းဘီအိတ်ကိုပါ သွန်မှောက်ပြပါမယ်။
ရှိရှိသမျှ မှောက်ပြလိုက်ရရင်တော့ ဒါလေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။
ပိုက်ဆံအိတ်လေးရယ်၊ သော့လေးတစ်စုံရယ်၊ ဖုန်းလေးတစ်လုံးရယ်၊ နားကြပ်လေးတစ်ခုရယ်၊ ဘောင်းဘီဘေးအိတ်ထဲ ထည့်ထားလေ့ရှိတဲ့ သင်ပုန်းကွန်ပျူတာလေးတစ်ခုရယ်နဲ့ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ မင်နီဘောလ်ပင်လေးတစ်ချောင်းရယ်ပါပဲ။
သော့လေးကတော့ အပြင်တံခါးနဲ့ အခန်းတံခါးသော့ပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သော့လေးကို ကီးချိန်းလေးတွေ တပ်ပြီးထားတတ်ပေမယ့် အခုကြီးလာတော့ ဘာမှကို တပ်ထားချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ သော့လေးလည်း အခုလိုမျိုး တုံးတိတိလေး ဖြစ်နေရှာတော့တယ်။ ဖုန်းနဲ့ နားကြပ်လေးကတော့ ဘာမှရှင်းပြနေစရာ မလိုတဲ့ နေ့စဉ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေပါပဲ။
သင်ပုန်းကွန်ပျူတာလေးကတော့ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် တော်တော်လေးကို အရေးပါတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားငယ်လေးတွေကို စာသင်တဲ့အခါမှာ အသံထွက်ပြောပြချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့မသိမမြင်ဖူးတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို ပြဖို့အတွက် ပုံလေးတွေပြချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်လေးတွေကို သွားချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အတန်းကြီးသမားတွေကို Reading Assignment လေးတွေ ပေးဖို့အတွက် ဆောင်းပါးလေးတွေ ရှာပေးတဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြဲတမ်း အသုံးပြုနေရတယ်။ ဒါ့အပြင် ရထားစောင့်၊ ကားစောင့်နေတုန်း၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ အအေးဆိုင်ထိုင်နေတုန်း အချိန်ဖြုန်းချင်ရင် သင်ပုန်းကွန်ပျူတာလေးထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ Ebook လေးတွေကို ထုတ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ စာအုပ်တစ်ချို့ကတော့ ဆရာသော်တာဆွေရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း၊ ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ မြို့ပြပိုးမွှားများ၊ မနုဿီဟအက်ဆေးများ၊ ဆရာပါရဂူရဲ့ စာအုပ်တစ်ချို့၊ ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ ရက်ကန်းလွန်း၊ ဆံရစ်ဝိုင်း ဝတ္ထုတိုလေးတွေ၊ ဒဿနစာအုပ်လေးတစ်ချို့နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ် နည်းနည်းပါးပါးပေါ့။ အချစ်အလွမ်း သရုပ်ဖော်ဝတ္ထု အရေးအသားတွေထက် အက်ဆေး၊ ဆောင်းပါး၊ အတွှေးအခေါ်စတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို ပိုဖတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းက ကျွန်တော်ဘယ်လိုစာတွေ ရေးဖြစ်တယ် ဆိုတာပေါ်မှာ အများကြီး လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေခဲ့တယ်။
ပိုက်ဆံအိတ်လေးကတော့ ရန်ကုန်ကအပြန်မှာ တစ်ယောက်သောသူလေးက အမှတ်တရလေး ပေးခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီ့နေ့က သာကေတ ရွှေပုဇွန်မှာ နောက်ဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော်တို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ သူလေးက ညနေခင်း ပုစွန်ဆီရောင်လေးနဲ့ လိုက်ဖက်လှတဲ့ ပန်းသွေးရောင် ဂါဝန်လေးဝတ်လို့။ အခုမှ ခေါင်းလျှော်ပြီးခါစ ပုံစံလေးနဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးတွေဆီက မွှေးရနံ့လေးတွေက လေအဝှေ့မှာ သင်းခနဲပျံ့ခနဲ။ ကျွန်တော်က သူလေးကို ကားပါကင်ထဲမှာ ဆင်းကြိုခဲ့တယ်။ ရွှေပုစွန်ရဲ့ နောက်ဖက်က ပန်းခြံလေးထဲမှာ သူလေးကို ထိုင်ခိုင်းထားပြီး ကောင်တာမှာ Mocha ကော်ဖီလေးနှစ်ခွက် မှာနေချိန် ကျောက်ခတ်ရေမှော်လေးတွေကို ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ရေစီးသံလေးတွေက တလွင်လွင်နဲ့ သစ်ပင်လေးတွေကြားမှာ ရိုက်ခတ်လို့။ ဆက်မပြောတော့ပါဘူးလေ။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆီလျော်တာတွေ ပြောမိတော့မယ်။ အဟတ်ဟတ်.
အဲဒီ့ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို ဆက်ဖွင့်လိုက်ရင် အထဲမှာ ဟောသလိုလေး စမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားလေးပါ။ သူ့နောက်မှာတော့ ရထားစီးတဲ့ Metro ကဒ်လေးပေါ့။
ဆက်ဖွင့်လိုက်ရင် ဒီလိုလေးတွေ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပထမကော်လန်မှာ ရှိနေခဲ့တာတွေကတော့ နယူးယောက်မှာ ရှိတဲ့ဘဏ်အများစုရဲ့ ကဒ်ပြားတွေပါ။ TD၊ Chase၊ Citi ဘဏ်သုံးခုလုံးရဲ့ ကဒ်ပြားကို ကိုင်ထားနိုင်ရင် နယူးယောက်တခွင် ဘယ်ကိုသွားသွား ပိုက်ဆံထုတ်ရတာ အဆင်တော်တော်ပြေပါတယ်။ ATM စက်တွေကိုလည်း တကန်တက လိုက်ရှာနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ တစ်ချို့ဆေးဆိုင်တွေမှာ Chase ATM ရှိတတ်သလို ရထားမှတ်တိုင်၊ ကားမှတ်တိုင်တွေနဲ့ အနီးဆုံးတွေမှာကျတော့ Citi ATM တွေ ရှိနေတတ်ပြန်တယ်။ အဝါရောင်ကဒ်ပြားလေးကတော့ စာကြည့်တိုက် အသင်းဝင်ကဒ်ပြားလေးပါ။ အဲဒီ့နောက်မှာ ဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့ တံဆိပ်တုံးထုထားတဲ့ ကဒ်ပြားလေးကတော့ အစဉ်အမြဲ အားပေးနေကျ Bubble Tea ဆိုင်လေးက Promotion ကဒ်ပြားလေးပါ။ ဆယ်ခွက်ဝယ်ရင် တစ်ခွက်အလကားပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဒုတိယကော်လန်ရဲ့ စစချင်းမှာ တွေ့ရတာကတော့ မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းခေါ်ဖို့ အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ Real Asia ဖုန်းကဒ်လေးတွေပါ။ ဖုန်းကဒ်တွေက ၂ ဒေါ်လာတန်နဲ့ ၅ ဒေါ်လာတန်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ၅ ဒေါ်လာတန်နဲ့ ခေါ်ရင် ၁၈ မိနစ်လောက် ရတတ်ပြီး ၂ ဒေါ်လာတန် တစ်ကဒ်နဲ့ ခေါ်ရင်တော့ ၈ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်လောက် ရတတ်ပါတယ်။ ၂ ဒေါ်လာတန် ၃ ကဒ်ဝယ်ရင် ၅ ဒေါ်လာပဲ ပေးရတာကတစ်ကြောင်း၊ ကဒ်ပြားအသေးနဲ့ ဖုန်းခေါ်ရင် လိုရင်းတိုရှင်းပြောလို့ ရတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ၂ ဒေါ်လာတန်လေးတွေပဲ နောက်ပိုင်းအားပေးဖြစ်တော့တယ်။ Viber တွေ၊ Tango တွေ ရလာပြီ ဆိုပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ MPT က အများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ဆိုတော့ ဖုန်းကဒ်လေးတွေက ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲမှာ အမြဲရှိနေတတ်တာ အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဖုန်းကဒ်လေးတွေအောက်မှာက ရထားကဒ်၊ ပြီးတော့ ကားမောင်းသင်တန်းကျောင်းက ယူလာခဲ့တဲ့ လိပ်စာကဒ် ၂ ကဒ်။ တစ်နေရာရောက်လို့ လိပ်စာကဒ်ယူရင် ၂ ကဒ်ယူလေ့ရှိတာ ကျွန်တော့်အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြလို့ရအောင် တစ်ကဒ်အပိုယူလိုက်ရုံ သက်သက်ပါပဲ။
တတိယကော်လန်ရဲ့ စစချင်းက ဇယားကွက်လေးတွေကတော့ အသည်းရောင် အသားဝါဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ ရက်တွေကို ဆရာဝန်က မှတ်ပေးထားတာပါ။ အတွဲလိုက်ထိုးရမှာဆိုတော့ ရက်တွေနောက်မကျအောင် ကဒ်ပြားလေးမှာ ရေးပေးထားတာကို ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲ ဆောင်ထားခဲ့တာပါ။ တတိယ ကာကွယ်ဆေးကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်ဝန်းကျင်မှာ ထိုးရဦးမယ်။ တစ်ပတ်ကြိုလောက် ထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှာ ထိုးလို့ရပြီပေါ့။ ကျွန်တော်သတိမေ့နေခဲ့ရင် သတိပေးကြဦးနော့။ မှတ်မိကြမယ်ဟုတ်။ အောက်ဖက်ကို ဆက်ဆင်းသွားလိုက်ရင်တော့ သွားဆေးခန်းက လိပ်စာကဒ်၊ အထွေထွေကုသတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ လိပ်စာကဒ်နဲ့ ဆီးဝမ်းအထူးကုဆရာဝန်ရဲ့ လိပ်စာကဒ်လေးတွေကို အစီအရီလေး ပြထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
စတုတ္တကော်လန်မှာတော့ ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ကျန်းမာရေး အာမခံကဒ်ပြား (Health Insurance Card) နဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဈေးအတူတူ ဝယ်ထားတဲ့ ပြေစာဖြတ်ပိုင်းလေးတွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ၄၆ ဒေါ်လာနဲ့ ၇၅ ဆင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို ပေးခဲ့ပြီးနောက် ဖြတ်ပိုင်းလေးကို လွှင့်မပစ်ဖြစ်သေးဘဲ ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲကို ထိုးထည့်ထားခဲ့မိတာပါ။ ဖြတ်ပိုင်းလေးရဲ့ ဘယ်ဖက်မှာတော့ အရေးအကြောင်းဆိုရင် အသုံးပြုဖို့အတွက် ဆောင်ထားတဲ့ ဆေးပလာစတာလေးပါ။
ဆေးပလာစတာလေး ဆောင်ဖို့အကျင့်ကို ကျွန်တော်လုပ်ယူခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၃ နှစ်ထဲကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ သွားရင်းလာရင်း၊ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အခါ အရေးပေါ် အသုံးပြုလို့ရအောင် ဆောင်ထားခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်အတွက်တင် မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူတွေအတွက်ပါ အသုံးတည့်ခဲ့တာတော့ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ တစ်ခါ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ချိတ်နဲ့ထိုးမိပြီး လက်ချောင်းပြဲသွားတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကို ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဘူတာရုံကအထွက်မှာ ချော်လဲလို့ ခြေထောက်နည်းနည်း ထိသွားခဲ့တဲ့ မျက်နှာစိမ်း မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ကိုလည်း ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ စကူတာစီးရင်း ချော်လဲသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ကျောင်းသားလေးရဲ့ ဒူးခေါင်းက ဒဏ်ရာကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ကပ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။
ပလာစတာလေးရဲ့ အောက်ဖက်မှာတော့ ထီလက်မှတ်လေးတွေပေါ့။ ပေါက်နိုးပေါက်နိုးနဲ့ ထိုးခဲ့ရတာလည်း ရှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ထိုးသာထိုးလိုက်တယ်၊ ထီတောင်မတိုက်ဖြစ်တော့ပြန်ဘူး။ အဲသလိုနဲ့ ထီလက်မှတ်အဟောင်းလေးတွေက ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲမှာ အခန့်သားထိုင်ရင်း အချင်းချင်း မိတ်ဆွေတွေကို ဖြစ်လို့။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ငွေစက္ကူလေးတွေပါပဲ။
ကဲ. ကျွန်တော့်အိတ်လေးထဲက ပစ္စည်းလေးတွေက ကျွန်တော့်အကြောင်းကို တစ်စုံတစ်ရာသော အတိုင်းအတာထိ ပြောပြပေးနေမယ်ဆိုရင် ဒီပို့စ်လေး ရေးရကျိုးနပ်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ထပ်ပြီး တက်(ဂ်)လုပ်ချင်တာကတော့ ကိုကြီး၊ ကီုညီလင်းသစ်၊ ကိုဏီလင်းညို၊ ကိုသတိုးနဲ့ မောင်မျိုးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘလော့ဂါမဟုတ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်(ခ်)ပေါ်က မိတ်ဆွေကြီး ကိုရန်မင်းအောင်ကိုလည်း တက်(ဂ်)လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျား.....
သြော်.. ကိုရန်အောင်... ကိုရန်အောင်...
လူကလဲ ရိုးရှင်း၊ အိတ်ထဲ ဆောင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကလဲ ရိုးရှင်း၊ သင်ပုန်းကွန်ပျူတာလေးထဲက စာတွေကလဲ ရိုးရှင်း၊ အင်း... မရိုးရှင်းတာဆိုလို့ နန်းပုံလေး ထုတ်မပြတာတစ်ခုပဲ.. :)
သူများအသုံးလိုရင် သုံးဖို့ ပလပ်စတာဆောင်တတ်တာလေးက နှစ်သက်စရာပါ။
လိပ်စာကဒ်ဆို ၂ခုယူတတ်တာကတော့ မိန်းမများယူရင်ရောလို့ မေးခွန်းထုတ်မိသွားချင်တဲ့အထိပါ... ဆြာရန်.. :D
ထင်ထားတာထက် cash များတယ်...း))
ထုတ်လို့ထွက်လာသမျှကို အသေးစိတ် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြတော့တာဘဲ... :)
Mr. Yan ရဲ့ ဘလော့ဂ်လည်း အခုမှပဲ သေသေချာချာ ရောက်ဖြစ်တော့တယ်... အိတ်မှောက် သွန်ပစ်ပြီး အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာကိုလည်း သဘောကျပါတယ်... ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ Topic ကို နောက်တပိုစ့်မှာ အကျယ်ချဲ့ပြီး ဆက်လက် ရှင်းလင်းပါ... အဟက် ဟက်
မိုက်တယ် ကိုရန်....၊း)
ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲမှာ အပိုရယ်လို့ သိပ်မရှိဘဲ နေ့စဉ် လိုအပ်တာတွေနဲ့ (ကြောင်လက်သည်း ဝှက်သလို) သိုသိုသိပ်သိပ်....၊း)) ပိုက်ဆံအိတ်၊ ဖုန်း၊ နားကြပ်၊ သော့တွဲ... ကျနော်တို့ ၂ ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ သယ်ပိုးမှုက အတော်တူတယ်ဗျ၊ ကိုရန်က အိုင်တီသင်ပုန်း တစ်ခုပဲ ပိုတယ်...။
>အန်တီအမ်..... မခိုင်ဆိုခဲ့သလိုပေါ့... ကိုယ်ညာခဲ့ပါတယ်. ဒါပေမယ့်တဲ့... အဲသလိုပဲ. ကျွန်တော်ရိုးသားခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အဟတ်ဟတ်... မိန်းမယူသွားခဲ့ရင်တော့ တစ်ကဒ်မှကို မဆောင်တော့ဘူးလားလို့ရယ်. တော်ကြာ ဆရာဝန်မလေး လိပ်စာဆောင်ထားမိလို့ ကွိုင်ရှာနေရင် ဒွတ်ခ...
>အိမ့်ချမ်းမြေ့... မလေးဆီကို စာအုပ်ပို့ဖို့ Cash ဆောင်ထားတာ ပြန်မထုတ်ဖြစ်သေးတာ.. တစ်နည်းအားဖြင့် စာအုပ်ပို့မယ့်ဆီကို မရောက်နိုင်သေးတာ. :P
>Rose of Sharon... ဒါတောင် မပြောပြဖြစ်လိုက်တာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်. :)
>မသက်ဝေဂျီး... ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့အရာကို သူလေးက ဘယ်သောအခါမှ မပြောပြပါနဲ့ဆိုလို့လေ... အဲဒါနဲ့... နောက်တစ်ပို့စ်ကျမှ ဖတ်တော့နော်. :P
>မောင်မျိုး... ဟုတ်တယ် ညီရေ.. ကိုယ်က တကယ်တော့ ဘာမှမရှိတဲ့ ကြောင်ကြီးတစ်ကောင်ပါ. အဲလေ. ကြောင်လက်သည်းဝှက် မြေပြန့် မြန်မာအမျိုးသားလေးပါ.. :D
>ကိုညီလင်းသစ်... ဟုတ်တယ်ဘရို.. Simplicity is the best way of living one's life. ဆိုသလိုပေါ့. (ကြီးကျယ်ကြည့်တာ.)ဒါပေမယ့် မရိုးတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်ဗျာ. ဘရားသားနဲ့ အေးဆေးတွေ့တော့မှ အိုင်တီသင်ပုန်းလေးထဲက ပုံလေးတွေ တစ်ချပ်ချင်းပြပြီး အဟတ်ဟတ် လုပ်ပြတော့မယ်. :P
စာသင်တဲ့ဆရာဆိုတော့ အလုပ်အိတ်လေးပါမယ် မှတ်တာ ၊ ဖိုတိုထဲကြည့်လိုက်တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဘဲနော်။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်လေးထဲမှာတော့ စုံစုံလင်လင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ပိုက်ပိုက် ချေးမလားလို့... စဉ်းစားနေတယ်အကို .. ရန် ..:P
>လရိပ်အိမ်... အဲဒါအကုန်ပဲ. ဒါပေမယ့် ကျောပိုးအိတ်တော့ မမှောက်ပြရသေးဘူး။ အဲဒီ့ အထဲမှာ ပိုစုံတယ်. :)
>အိန်ဂျယ်လှိုင်း... ပြန်ချေးလိုက်ရ. :D
လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ Senior Blogger တစ်ဦး ပါ အစ်ကို ... ။ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ... Blog ရယ် လို့ စပြီး သိရတဲ့အချိန်ကတည်း က Blogger တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ် ... ။ Blog တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဆိုတာလည်း လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ... ။ ဒါပေမယ့် ... ကိုယ်တိုင် က နည်းပညာ နဲ့ အလှမ်းဝေးနေသေးတော့ ... ဘာမှ ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး ...။
၂၀၀၉ မှာ IT နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ... ။ MyLoveCafe ဆိုတဲ့ Singapore Based Hosting Service ရဲ့ Admin ဆရာသမား ကောင်းမှု နဲ့ www.theingarra.com ဆိုပြီး ... Wordpress နဲ့ Blogging ထဲကို ရောက်လာဖြစ်ပါတယ် ... ။
ဒါပေမယ့် အတွေ့အကြုံနည်းသူ ဆိုတော့ ... Hosting Server Down သွားတဲ့ အချိန်မှာ ရေးထားသမျှ ပို့စ်တွေ ဘာမှ Backup မကျန်ခဲ့ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ Blogging ထဲမှာ ၀င်လိုက် ၊ ထွက်လိုက် နဲ့ အဆက်တော့ မပြတ်ခဲ့ပါဘူး ... ။ ဟိုအစ်မ တစ်ယောက် ပြောသလို Silent Reader ဆိုပါတော့ ... :) ။
အခု Blog Day က စလို့ ... Blogger အပေါင်း စာတွေ ပြန်ရေးဖြစ်လာတာ တွေ့ရတော့ ... ထပ်တူ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ် ... ။
နောက်ထပ်လည်း ... အခုလို Post တွေ ဖတ်သွားရမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
P.S : Comment ရေးရတာ ရှည်သွားမှာ စိုးတာနဲ့ ... ရပ်လိုက်ပါတယ် ။ စကားပြေ က ရေးနေမကျတော့ ... ဖတ်ရတော့ ... ထောင့်နေမယ် ထင်ပါတယ် ... :D